I-Intanethi yeZinto-iPandawill Technology Co, Ltd.
Inkqubo ye- I-Intanethi yezinto (IoT) ithatha indawo. Ngokwesiqhelo, i-IoT kulindeleke ukuba inikeze unxibelelwano oluphambili lwezixhobo, iinkqubo, kunye neenkonzo ezigqitha kunxibelelwano lomatshini ukuya kumatshini (M2M) kwaye igubungela iinkqubo ezahlukeneyo, imimandla kunye nokusetyenziswa. ), kulindeleke ukuba zingenise izinto ezizisebenzelayo phantse kuzo zonke iinkalo. Kuqikelelwa ukuba kuya kubakho malunga nezixhobo ezizibhiliyoni ezingama-26 kwi-Intanethi yezinto ngo-2020. Ukubanakho ukunxibelelana nezixhobo ezifakiwe nge-CPU, imemori kunye nezixhobo zamandla kuthetha ukuba i-IoT ifumana usetyenziso phantse kuwo onke amabakala. Nazi iinkqubo eziphambili ze-Intanethi zezinto.
Ukubeka iliso kokusiNgqongileyo
Ukusetyenziswa kokujongwa kwendalo kwe-IoT kusetyenziswa izixhobo zokuncedisa kukhuselo lokusingqongileyo ngokujonga imeko yomoya okanye amanzi, iatmosferi okanye imeko yomhlaba, kwaye inokubandakanya indawo ezinje ngokujonga ukuhamba kwezilwanyana zasendle kunye neendawo ezihlala kuzo.
Ukwakha kunye nokuZenzekelayo kwasekhaya
Izixhobo ze-IoT zinokusetyenziselwa ukubeka esweni nokulawula iinkqubo zoomatshini, zombane neze-elektroniki ezisetyenziswa kwiintlobo ezahlukeneyo zezakhiwo (umz., Ezabucala nezabucala, ezamashishini, amaziko, okanye indawo yokuhlala. Iinkqubo ezizenzekelayo zasekhaya, njengezinye iinkqubo zokwakha ezizenzekelayo, zihlala zisetyenziselwa lawula ukukhanya, ukufudumeza, ukungena komoya, umoya opholileyo, izixhobo zombane, iinkqubo zonxibelelwano, ukonwaba kunye nezixhobo zokhuseleko ekhaya ukuphucula ukulunga, intuthuzelo, ukusebenza kwamandla, kunye nokhuseleko.
Ukudityaniswa kweenkqubo zokuzivavanya kunye nokusebenza, okunxityelelaniswe kwi-Intanethi, kunokwenzeka ukuba kwandise ukusetyenziswa kwamandla xa iyonke.Kulindelwe ukuba izixhobo ze-IoT ziya kudityaniswa kuzo zonke iintlobo zezixhobo zokusebenzisa amandla kwaye bakwazi ukunxibelelana nenkampani yokubonelela ngezixhobo ukuze Ukulungelelanisa ngokufanelekileyo ukuveliswa kwamandla kunye nokubonelelwa kwezi zixhobo ziya kuthi zinike ithuba kubasebenzisi ukuba bazilawule kude izixhobo zabo, okanye bazilawule embindini ngokusebenzisa ujongano olusekwe kwilifu, kwaye benze imisebenzi ephambili njengokucwangciswa.
IiNkqubo zezoNyango nezeMpilo
Izixhobo ze-IoT zinokusetyenziselwa ukwenza ukuba kubekwe esweni impilo ekude kunye neenkqubo zesaziso esingxamisekileyo. Ezi zixhobo zokubeka esweni impilo zinokuya ukusuka kuxinzelelo lwegazi kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo ukuya kwizixhobo eziphambili ezinokwazi ukubeka esweni izinto ezifakwayo, ezinje ngezixhobo zokwenza amandla okanye izixhobo zokuva eziphambili. Abemi, ngelixa beqinisekisa ukuba kunyangwa unyango olufanelekileyo kwaye bencedisa abantu ukuba baphinde bahambe ngokulahleka kunyango kunye nezinye izixhobo zabathengi ukukhuthaza impilo esempilweni, ezinje, ngezikali ezixhumeneyo okanye iimonitha zentliziyo ezinxibekayo, nazo zinokwenzeka kwi-IoT.